Eritreritr'i stahtam - Namana Serasera.org
stahtam 31/08/2015 12:24
Stahtam, eritreritra nandalo mikasika ny hafatra nalefan-dRafieritreretana tamin'ny 31/08/15:
1°) Raha tena mamaky ny Jaona toko faha 4 io dia izao no voalaza ao: ny Jiosy ihany no miaraka amin'Ilay nampisy ny lanitra sy ny tany rehefa mivavaka fa ny hafa firenena kosa dia mivavaka amin'izay tsy fantany. Koa raha misy malagasy mampianatra fivavahana dia aiza no azo anasokajiana azy, hafa firenena mivavaka sa Jiosy mivavaka?
2°) Ekena fa Jiosy tokoa ny Mesia, anarana jiosy ny anarany, koa ny hafa firenena (Malagasy) ve no tena mahalala ny anaran'Ilay Mpanjakan'ny Jiosy sa ny vahoaka anjakany (Jiosy)?
3°) Momba ilay hoe: "jereo ny Baiboly Hebreo" dia mba lasa koa ny eritreritra hoe boky tsy nomeny ny hafa firenena akory ve dia hisy hafa firenena haka fahefana ka haniraka olona hampijery izany ary avy eo hampianatra izany? Salamo 147/19,20.
4°) Raha manoratra ny fiantsoana Ilay nampisy ny lanitra sy ny tany Rafieritreretana dia mampiasa "A..." fa "a..." kosa ho an'ireo sampy; mba ahoana kosa ny heviny mikasika ny fanambaran'ny mpitana ny fomba malagasy hoe: "MPANGALATRA ny kristiana raha mampiasa io anarana io satria an'ny Malagasy efa talohan'ny nidiran'ny Baiboly teto io fiantsoana io", izany hoe zavatra hafa mihitsy no tondroina amin'io fa tsy Ilay ivavahana velively. Nitso-drano toa izao kosa mantsy ny Malagasy fahiny: "Hotahian'A... sy ny raz... e!".